मदन पुरस्कार वितरण- संस्मरण-संक्षेप,(कमल दीक्षित)
वासु श्रेष्ठले मलाई सोध्नुभयो “तपाई कसरी मदन पुरस्कारलाई विवाद-रहित बनाउन सफल हुनुभएको छ ?” भनेर । मलाई अचम्म लाग्यो । कहाँ भएको छ र मदन पुरस्कार विवाद-रहित? हरेक वर्ष कति गालि खानुपर्छ ! हो, हरेक साल केही प्रशंसा पनि हुन्छ । त्यसैले छ्वाय फ्वाय मिलाउंदा अर्थात् ‘याभरेज’मा गाली र तारिफ उस्तै हुन्छ भनौं ! यसैलाई वासुजीले भनेजस्तो ‘विवाद-रहित’ मानिदिए ठिकै छ । त्यसो भए, यो कसरी हुन सक्यो मैले बताउनु पर्ने भयो । म त्यही कोशिश गर्नेछु । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
पहिलो कुरा मदन पुरस्कार कुनै पनि एक जनाको इच्छाले दिन सकिंदैन । पचास वर्षदेखि आएको यसको परम्परा छ र खारिंदै, सुधारिंदै आएको यसको चयन-प्रकृया छ । त्यसो हुंदा म यो कितापलाई पुरस्कार दिलाइछाड्छु भनेर कुनै सदस्य या परीक्षकले भन्न सक्तैन र त्यस्तो प्रयास गर्‍यो भने ऊ असफल हुन्छ । मैले यहाँ सदस्य र परीक्षक भनेर भिन्नाभिन्नै नाम लिएँ, त्यो किनभने मदन पुरस्कारमा ती दुई थरी अलग इकाई हुन् । सदस्य भनेका गुठीका सदस्य जसले सामूहिक निर्णय लिन्छन् र परीक्षक भनेका खाश-खाश पुस्तक पढ्ने, परीक्षण गर्ने र सिफारिस गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । परीक्षकले पारिश्रमिक पाउंछन्, सदस्य अवैतनिक हुन्छन्, स्वयम् सेवक जस्तो । परीक्षकले गरेको निर्क्यौल मान्न सदस्यहरू वाध्य छैनन् । तर परीक्षक भनेका विशेषज्ञ हुन्छन्, सदस्यहरू सामान्य व्यक्ति । यी दुईको ‘केमिष्ट्री’ फरक फरक हुन सक्छ । यी दुबै थरिको सन्तुलनले गर्दा नै यो पुरस्कार यतिसम्म विवादमुक्त हुन सकेको हो कि ? वासुजी, म यसै भन्न सक्तिन ।
विवादयुक्त या मुक्त हुने कुरालाई यही छाडेर म अब वासुजीको दोस्रो जिज्ञासातिर लाग्छु । मदन पुरस्कार दिंदाको अनुभव सोध्नुभएको छ उहाँले- कुन वर्षको पुरस्कार दिंदा सबभन्दा सजिलो भो अनि कुन वर्ष सबभन्दा गार्‍हो । भनूँ भने सबभन्दा गाह्रो वर्ष हामीलाई २०३१ र २०३३ साल भए । किनभने ती दुई वर्ष कसैलाई मदन पुरस्कार दिइएन ! गुठीको नियमै त्यस्तो थियो । कुनै वर्ष ‘सर्वश्रेष्ठ’ हुने पुस्तक पाइएन भने पुरस्कार दिनु हुदैंन । गुठीको नियमावलीको ‘सर्वश्रेष्ठ’ हुने परिभाषा अलि अलग छ । 'सर्वश्रेष्ठ' हुनलाई त्यस कितापले त्यही वर्षका अरूलाई त जित्नै पर्छ तर त्यसभन्दा माथि त्यस पुस्तकले ‘नेपाली भाषा वाङ्मयमा नयाँ र महत्वपूर्ण कुरा प्रदान गरी भाषाको भण्डारलाई समृद्ध तुल्याएको समेत’ हुनुपर्छ । यसै भन्छ म.पु.गुठीको नियमावलीले । बढो कठिन शर्त हो यो । ती दुई वर्ष कुनै पनि कृति पुरस्कृत गर्न नसक्दा गुठीले यति धेरै विरोध भोग्यो । त्यसपछि ‘दुर्दुहाई’ ! जे होस्, राम्रो मध्येबाट एउटा कितापलाई छनौट गर्ने गरेको छ गुठीले ।
कुन वर्ष भयो सरल या सजिलो भन्ने पनि प्रश्न थियो वासुजीको । पुरस्कारको छनौट सजिलो त कुनै वर्ष पनि हुदैंन । गुठीको सबै प्रकृया पूरा नगरी पुरस्कार पाउने पुस्तक चयन हुन सक्तैन। प्रकृयाको अन्तिम विन्दु भनेको गुठीको साधारण सभा हो । सबै सदस्य (१४-१५ जना) जम्मा भएको बैठकले पुरस्कारको टुंगो लगाउंछ । परीक्षकहरूको शिफारिस या उपसमितिहरूको निर्क्यौल सबै त्यो साधारण सभाले उल्टाउन सक्छ । उल्टाएको छ पटक पटक । कुन कुन वर्ष त्यस्तो भयो मैले भन्न मिल्दैन । तर भएको छ २/४ पटक यो ५० वर्षमा । तर चयन-प्रक्रिया एकनासे, अनिवार्य र लामो भए पनि, त्यसलाई म अपठेरो छ भन्न सक्तिनं । किनभने यत्तिका वर्ष अभ्यास गर्दागर्दा त्यो सबै सरल लाग्न थालेको छ मलाई । राम्ररी तेल, ग्रीज हालेको मेसीन आवाजै नगरी चलेजस्तै लाग्छ यो प्रक्रिया अब त !
मदन पुरस्कारबाट आजसम्म जम्माजम्मी ६७ ओटा पुस्तक (ग्रन्थ भन्छौं हामी गुठीमा) पुरस्कृत भएछन् । त्यसका लागि ६५ जना विद्वान् हरू सम्मानित भएछन् । यो पुस्तक र मान्छेको संख्या नमिलेको कारण चाहि कुनै पुस्तक संयुक्त लेखनका पनि भएर हो। ती ६७ ओटै पुस्तक पुरस्कृत हुँदा मलाई उत्तिकै सन्तोष या खुसी लागेको थियो भन्न चाहीं म सक्तिनं । किनभने, जतिसुकै निस्प्रिह, निरपेक्ष रहे पनि मान्छेको रुचि भन्ने कुरा सितिमिति मर्दैन । आफूलाई मन परेको किताप पुरस्कृत हुन् भन्ने चाहना जसको पनि हुन्छ मेरो पनि हुन्छ नै । तर त्यस्ता किताप छनौटमा नपर्दा चित्त दुख्छ मेरो पनि । त्यस्तो भएको छ यदाकदा । कुन कुन पुस्तक हुन् म भन्दिनं। तर आफूले गर्न सक्ने केही हुदैन त्यस्तोमा पनि वासुजी, त्यसैले यो प्रसङ्गलाई यत्तिमै छाड्छु ।
मदन पुरस्कारबारे अरू के भनूँ ? बरू पुरस्कार जगदम्बाश्री-बारे केही बताऊँ कि क्या ! मदन पुरस्कार गुठी स्थापना गर्ने रानी जगदम्बाको २०४५ सालमा स्वर्गवास भयो । उहाँ स्वर्गे भएपछि गुठीका अध्यक्ष हुनुभयो मेरो पिताजी केदारमणि आ.दी. । मैले पिताजीलाई भने-जर्साब (मदन शमशेर)कै सरहको एउटा पुरस्कार रानीसाहेबको नाममा पनि राख्नुपर्‍यो- भनेर । पिताजीले एक वाक्यको जवाफ दिनुभयो- “पैसा काँबाट ल्याउछस्?” कुरो ठीक थियो । अर्को पुरस्कार गुठीको मौजुदा आमदानीबाट दिन सकिदैंनथ्यो, पैसै पुग्दैनथ्यो । म गुठीको सचिव, मैले त्यो वुझ्नुपर्ने थियो तर भावुकतावस मैले त्यो बिर्सेको रहेछु । मैले त्यसपछि रानीसाहेबको नाममा पुरस्कार थप्न गर्नु कोशिस गरें । तर पैसो कतैबाट झरेन ! अनि मैले निर्णय गरें । थप्छु पैसा म आफ्नै तर्फबाट भन्ने मैले अठोट गरें र पिताजीलाई भनें । मेरो निजी आर्थिक स्थिति थाहा थियो पिताजीलाई तर उहाँले केही आपत्ति गर्नुभएन। अनि, रानीसाहेबको ४५ दिनको अवसरमा हामीले, भन्नाले गुठीले, जगदम्बा-श्रीको घोषणा गर्यो । ११ लाख रूपियाँ गुठीको मूलधनको अक्षयकोष थपियो अनि विधिवत् जगदम्बा-श्री दिन थालियो । मदन पुरस्कार कृतिलाई दिइन्थ्यो, जगदम्बा-श्री भने व्यक्तिलाई दिइने भयो – नेपाली भाषको सेवाका लागि । जुन विधाबाट, जसरी भए पनि, नेपाली भाषाको उल्लेख्य सेवा गर्नेलाई यो पुरस्कार दिइन्छ । २०४५ सालको पहिलो जगदम्बा-श्री दिइयो नारायण गोपाललाई । गलाका माध्यमबाट नेपाली भाषाको अतुलनीय सेवा गरेको भनेर नारायणजी जगदम्बा-श्री द्वारा सम्मानित हुनुभयो ।
मदन पुरस्कारका बारेमा मैले भन्न सक्ने कुरा यिनै हुन् । तर जांदाजांदै यस वर्षको पुरस्कारका बारेमा केही भनिहाल्न मन लाग्यो । यस वर्ष अर्थात् २०६६ सालको पुरस्कार जगदम्बा-श्री जनकपुरका डा. राजेन्द्र विमललाई दिइयो, अनि मदन पुरस्कार पायो नेपालको बालीनालीको नालीबेली केलाइएको एउटा वृहद् ग्रन्थले ! यसका लेखक बैतडीका नरबहादुर साउँद। साउँदजी २० वर्षदेखि ह्वील चेयरका सहाराले बाँचिरहेका रहेछन् । हामीलाई थाहा थिएन । हजार पृष्ठको त्यत्रो ठूलो किताप उनले ओछ्यान मै बसेर लेखिसकेका रहेछन्। सबै त्यो थाहापाउंदा हामी सबैलाई उनीमाथिको श्रद्धा झन् बढ्यो ।
यसपटकको पुरस्कारको चयनमा हामीले खूव धन्यवाद खान पायौं ।खुशी लागेको छ।
यही नै हो पुरस्कारहरूको बारेमा मेरो संस्मरण-संक्षेप !
२४ असोज २०६७
Thanks Kamalmani Sir Yo patak ma pani sachhai Khusi vaeko chhu.Madanpuraskar guthi Dhaneybadko patra chha Madan Puraskar ko nimti.